Guitar Pro 7, maitiro ekuiisa pane Linux neiyo Soundbanks | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura ndakanyora chinyorwa Yakanga iri pamusoro wenyaya yatisingade kubvuma: vagadziri havateedzere vashandisi veLinux zvakanyanya. Kunyangwe isu tiine zvese, hazviwanzo seyakanaka uye inonzwisisika software senge iyo yavanogadzirira yeWindows uye macOS, uye semienzaniso isu tine iyo GarageBand iyo yandinoda zvakanyanya kana chirongwa chakakurumbira chekunyora nekuverenga zvibodzwa kana kutogadzira mimhanzi. . Ndiri kutaura nezve software ine yazvino vhezheni iri Gitare Pro 7, kunyangwe hazvo vakatoburitsa yakawanda yekuvandudza yezvakateedzana.
Tux Guitar ndiyo imwe nzira yatinayo paLinux. MuseScore inowanzo kurudzirwa, asi ini ndinofunga hapana kana eiri akafanana. Guitar Pro 7 ndiko kushanduka kwechisikigo kweshanduro yapfuura, uye kwete, haiwanike kune Linux. MuAUR mune vhezheni yeGP6 yevashandisi vane rezinesi, asi haigone kuitwa kurira nzira yakanakisa nekuti pasuru yeiyo mabhanga anonzwika, izvo zvinoita kuti zvese zvinzwike zvakanyanya.
1 Isa Guitar Pro 7 paLinux ne PlayOnLinux
2 Yakakwana kune wepakati mushandisi
Isa Guitar Pro 7 paLinux ne PlayOnLinux
Ndakaedza iyi sisitimu neManjaro uye Ubuntu, saka inoshanda. Kuisa Guitar Pro 7 kuri nyore, muchokwadi kunoitwa muchinguvana nekuda kwePlayOnLinux, asi haina kurira kana tisingawedzere maRoundbanks. Pano tave kuzokuratidza maitiro ekuisa zvese kuitira kuti iwe ugone kunakidzwa neGuitar Pro 7 paLinux dzinenge senge paWindows.
Takatora kopi yeGuitar Pro 7 yeWindows. Iyo sei uye kupi zvinoenderana neimwe neimwe.
Isu tinodawo inoitwa / inogadzikana yeSoundbanks, iri faira reEEE. Avo vanouya ne .gpbank yekuwedzera vanowanzo kuparara; chirongwa ichi chakarembera paunenge uchiedza kuwedzera.
Isu tinoisa Playonlinux. Iyo iri mumahofisi epamutemo, saka inogona kuiswa kubva kune software centre yezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux.
Isu tinotanga PlayOnLinux.
Tinodzvanya pa "Isa chirongwa."
Isu tinotsvaga "Guitar Pro". Iyo yechinomwe vhezheni inoratidzika senge sarudzo.
Isu tinosarudza "Guitar Pro 7" uye tinogamuchira chiziviso icho chinotitaurira kuti chiri muchikamu chekuyedza uye kuti chimwe chinhu chinogona kutadza.
Iyo inotibvunza isu kana isu tichida kuenda kune yepamutemo webhusaiti kurodha pasi software. Unogona kuti hongu, asi mumuenzaniso ini ndanga ndatova nezvose zvandaida ndikati kwete.
Tinodzvanya "Bhurawuza", tsvaga iyo inogona kuiswa faira yeGitare Pro 7 wobva wadzvanya zvinotevera.
Iye achatiudza kuti anoda mamwe maturusi. Isu tinoisa zvese zvaunokumbira kwatiri.
Ipapo maitiro ekumisikidza anotanga, zvakanyatsoita izvo zvataizoona kana tikazviita kubva paWindows. Tinogamuchira zvese sezvazviri. Kunyangwe ini ndichikukumbira iwe kuti usagadzire iyo nzira ipfupi pane desktop, unozvitenda, asi chakakosha ndechekuti newewo utigadzirire isu mumenyu yekutanga.
Kunyangwe pasina chinofanira kuitika kana tikachitanga, zviri nani kusanamira bhokisi iro rinotiudza kuti chirongwa ichi chinotanga uye tinya pane "Pedzisa" (pedzisa).
Tinomirira kwekanguva kuti kuiswa kwacho kupedze uye tinya zvinotevera. Muvhidhiyo uchaona kuti ndinoitanga, asi kuratidza kuti, kunyangwe ichifanira kurira, maGPX mafaira haaridze.
Iye zvino tinodzvanya pa "Isa" uye sarudza "Isa chirongwa chisina kunyorwa".
Kana tasvika pane imwe nhanho, tinofanirwa kusarudza "Horaiti kana kugadzirisa chishandiso chiripo".
Tinobaya pane «Inotevera» uye sarudza «Guitar Pro 7».
Isu tinoisiya mu32-bit kuisirwa.
Zvekare zvakare, isu takasarudza "Ongorora", asi panguva ino isu takasarudza iyo Soundbanks EXE.
Iyo yekumisikidza ichavhurazve. Tiri kugamuchira sezvazviri. Uku kumisikidza kunogara kwenguva refu. Kana iwe uchiona vhidhiyo, pano ini ndinovhura Tux Guitar kuti uenzanise. Kana iwe uchifunga kuti zvese zviri kufamba zvishoma nezvishoma, komputa yandakashandisa yakangwara kwazvo, uye inowanzo shungurudza kana ini ndaisa software.
Kana kumisikidzwa kweSkybanks kwapera, inotiudza kuti timirire, asi inogara ichinditadza uye iyo yekumirira haina magumo. Ini ndinovhara hwindo mushure memasekondi mashoma uye zvinoita sekunge pasina dambudziko.
Yakakwana kune wepakati mushandisi
Chinhu chimwe chiri pachena: tiri kushandisa Guitar Pro 7 kuburikidza neWINE Uye, kunyangwe ndisina kuwana chero muganho, ichokwadi zvakare kuti handina kubatana chero chinyoreso, saka handigone kusimbisa kuti zvese zvinoshanda. Ehe, ini ndinogona kutaura kuti chirongwa ichi chinozvibata mushe, kunyangwe muvhidhiyo ichiita kunge inopesana, uye ndinofunga zvakakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuisa Guitar Pro 7 paLinux uye unakirwe neyakanakisa software yevanogitare nezwi rakanakisa
Mhoro!! Ndatenda nerubatsiro! I did the test and in my case playback yeaudio yakatanga kundandama nekukakama ndichifamba. Panguva ino, handina kuwana mhinduro, kana zvikaitika kune mumwe munhu uye aigona kuzvigadzirisa, zvingava zvakanaka kuziva kuti sei! Kwaziwai!